Somali | Housing.vic.gov.au
Website-kan (housing.vic.gov.au) wuxuu ku siinayaa macluumaad fara-badan oo loogu talagalay dadka kuwaas oo doonaya inay wax badan ka ogaadaan gurisiinta Victoria.
Haddii aad raadinayso macluumaadka ku saabsan gurisiinta Victoria, waxaad ka heli kartaa macluumaadka qaarkiis aad uga baahan tahay goobtan, ayadoo uu ku caawinayo turjumaanku.
Website-ka waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan hooyga waqtiga shidada iyo degdegga, oo loogu talagalay dadka kuwaas oo guri la’aan ama waqti shiddo ah ku jira, oo ay ka midka yihiin rabshadda qoyska.
Haddii aad ka walwalsan tahay wax ku saabsan cid kasta ammaankeeda dhow, waxaad ka wacdaa booliiska 000.
Haddii aad guri la’aan tahay, ama aad qatar ugu jirto guri la’aan ama aad ka cararto rabshadda qoyska, waxaad heli kartaa caawimaad. Waxaad wacdaa khadka crisis line on 1800 825 955. Waa khad lacag la’aan ah waxaanad wici kartaa maalinta iyo habeenka oo dhan.
Waxaa jira macluumaad ku saabsan ikhtiyaarada guri-siinta oo ku yaal website-ka loogu talagalay dadka dakhliga hoose, oo ay ku jiraan dadka kuwaas oo ah:
ku noolaanshaha iinta ama cidda daryeelka u baahan
u-baahashada caawimaad si ay gurigooda ugu noolaadaan—ama ha yeeshaan ama ha kireysteene.
Ayadoo loogu talagalay kireysteyaasha hadda ee guryaha dadweynaha iyo dadka ku jira liiska sugitaanka website-ka waxaa ku yaal macluumaad ku saabsan:
xuquuqda iyo masuuliyadda kireystaha
wax-ka-dhimidda iyo daymaha
u-guuridda kireysiga guryaha gaarka ah
ka-caawinta howlaha nolol-maalmeedka
u-guuridda guri dadweyne oo kale
yunidyada socda oo loogu talagalay saaxiibka ama qaraabada kaas oo da’ ah ama qaba baahiyo taageerid
gadashada gurigaaga dadweyne
wixii macluumaad iyo taageerid kale ah.
Wixii loogu talagalay kireysteyaasha guryaha gaarka iyo kireysiga, waxaa jira macluumaad ku saabsan caawimaadda ku noolaanta gurigaaga ama ka-caawinta helidda meel la kireysto. Website-ka waxaa ku yaal macluumaad ku saabsan:
daymaha degdegga ah ee kirada
ikhtiyaarada hooyga loogu talagalay dadka qaba iinta ama dadka u baahan in laga caawiyo howlaha nolol-maalmeedka
adeegyada cusbiinaysiinta caafimaadka iyo ammaanka iyo daymaha
helidda meel la kireysto
halka la tago haddii aad ka qabto dhibaatooyinka ku saabsan kireysiga ama derisyada.
Wixii loogu talagalay milkiileyaasha iyo gateyaasha, waxaa jira macluumaad ku saabsan caawimaadda ku noolaanta gurigaaga ama ka-caawinta inaad gadato guri. Website-ka waxaa ku yaal macluumaad ku saabsan:
caafimaadka iyo ammaanka
deeqaha iyo wax-ka-dhaafka milkiilaha guriga
ikhtiyaarada gurisiinta loogu talagalay dadka qaba iinta.
Waxaa jira qayb ku taal website-ka cabashooyinka iyo racfaanada sidaas darteed waxaad noo sheegi kartaa haddii aadan ku qanacsanayn adeeggayaga, ama haddii aadan waafaqsanayn go’aanka aan ka samayno codsigaaga.
Website-ka waxaa ku jira caawiyaha Tusaha Ikhtiyaarada Gurisiinta. Caawiyahan wuxuu dadka weydiiyaa inay ka jawaabaan dhowr su’aalood oo fudfudud wuxuu muujin doonaa ikhtiyaarada gurisiinta oo ay heli karaan.
Housing.vic.gov.au waxaa haga Qaab-dhismeedka Gurisiinta Bulshada Victoria, oo ah New Directions for Social Housing: A Framework for a Strong and Sustainable Future (Tilmaamo Cusub oo loogu talagalay Gurisiinta Bulshada: Qaab-dhismeedka Mustaqbalka Adag oo Sii-soconaya) oo la faafiyey Maariso 2014.
Cinwaanka Website-kayaga waa: housing.vic.gov.au
Adeegyada turjumaanka, ka eeg boggayaga Language Link